Topnepalnews.com | समीक्षा २ नम्बर प्रदेश : कांग्रेस पहिलो , फोरमलाई प्रचण्डको सक्रियताले धोका !
समीक्षा २ नम्बर प्रदेश : कांग्रेस पहिलो , फोरमलाई प्रचण्डको सक्रियताले धोका !
Posted on: September 23, 2017 | views: 374
दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । अहिलेसम्मको मतपरिणामले दुई नम्बर प्रदेशमा प्रतिष्पर्धामा उत्रेका मुख्य ६ दल कोही पनि उत्साहित हुन सकेका छैनन् । दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो हुने निश्चित देखिएको छ भने बाँकी स्थानका लागि दलहरुबिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
अहिलेसम्मको मतगणना हेर्दा दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति बलियो देखिएको छ । यसअघिका दुई चरणको चुनावमा दोस्रो स्थान पाएको कांग्रेस दुई नम्बरमा भने पहिलो हुने निश्चित छ । तर चुनावी परिणामबाट कांग्रेस सन्तुष्ट देखिँदैन । यसअघिका दुई चरणको चुनावमा ५० स्थान बढी जितेर पहिलो भएको एमालेलाई दुई नम्बर प्रदेशबाट फराकिलो अन्तरले पछि पार्दै समग्रमा पहिलो दल बन्ने कांग्रेसको योजना सफल हुने सम्भावना निकै कम छ।
दुई नम्बर प्रदेशमा दोस्रो दलको रुपमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम आउने पक्का जस्तै देखिएको छ । चुनावी परिणामबाट उत्साहित देखिएको फोरम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो एक महिना तराईमा गरेको सक्रियताका कारण आफ्नो भोट घटेको मूल्यांकन गरिरहेको छ । फोरम दुई नम्बर प्रदेशमा दोस्रो हुने पक्कापक्कीसँगै आउँदो मंसिरमा हुने संघीय चुनावमा देशको चाथौ ठूलो दलका रुपमा उदाउने सम्भावना पनि बढेको छ।
दुई नम्बर प्रदेशमा तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र र राजपाबिच टक्कर देखिएको छ । स्थानीय तह चुनावबाट सम्रगमा पहिलो दल बन्ने सम्भावना कायमै रहे पनि एमाले दुई नम्बर प्रदेशमा भने निक्कै खस्किएको छ । मधेस बिरोधी भनेर आरोप खेप्दै आएको एमालेका लागि दुई नम्बर प्रदेशको परिणामले ठूलै झड्का दिएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा बाहिर बाहिर पहिलो दल बन्ने दाबी गरे पनि कम्तिमा दोस्रो स्थानमा आउने आश गरिरहेको एमालेका लागि तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्न पनि मुश्किल देखिएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको दक्षिणी भेगमा कमजोर मानिएको एमालेले पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासमा बलियो उपस्थिति जनाउने आँकलन गरिएको थियो । तर अहिलेसम्मको मतपरिणामले एमाले राजमार्ग आसपासका स्थानीय तहमा पनि कमजोर देखिएको छ । १५/२० दिन अघिसम्म पार्टीको नामै सुन्न नचाहने दक्षिणी भेगमा उम्मेदवार खडा गर्न सक्नु नै एमालेका लागि उपलब्धी बनेको छ ।
यसअघि भएका दुई चरणको चुनावमा कमजोर देखिएको माओवादी दुई नम्बर प्रदेशमा भने तुलनात्मक रुपमा बलियो देखिएको छ । दुई नम्बर प्रदेशको चुनावले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भने झड्का दिएको छ । मधेसको एक मात्र शक्ति आफू मात्र भएको दाबी गर्ने ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपाले सोचे जस्तो परिणाम नल्याउने पक्का भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरेको राजपाका लागि तेस्रो स्थान पनि के हो के भन्ने अवस्था छ ।
यसैगरी विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई पनि उत्साहित बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म घोषित परिणाममा उ राजपा र संघीय समाजवादी फोरमभन्दा निकै पछाडि छ ।